Khasino eku inthanethi | ikhasino ye Slots Capital yaku intanethi | R70 wamahhala ongadingi diphozithi we bhonasi le khasino
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-slots capital casino
Isibuyekezo se-Slots Capital Casino
Ibhonasi Lokukwamukela:R27,770 Ibhonasi Lokukwamukela
R70 Ama-No Deposit Bonus Amahhala
I-Slots Capital Casino isungulwe ku-inthanethi ngo-2012. Inikela ngenqwaba yemidlalo yasekhasino ye-inthanethi (ngaphezulu kwengu-250), kufaka phakathi ama-three-reel slot, ama-slot evidiyo, ama-progressives, imidlalo yasetafuleni , i-poker yevidiyo, imidlalo ekhethekile, i-scratch and win, i-instant bingo nama-slot akudala. Kukhona ibhonasi enkulu yediphozithi engekho kusukela lapho ubhalisa kanye namanye amabhonasi okukwamukela. Kukhona nethuba lokuwina imiklomelo namabhonasi ansuku zonke anikezwa uma wenze amadiphozithi phakathi nesonto.
Lukhona usizo lwamakhasimende lwamahora angu-24 olutholakalayo izinsuku eziyisikhombisa zesonto ngengxoxo ebukhoma noma nge-imeyili, okusho ukuthi noma yiziphi izingqinamba zingaxazululwa ngesikhathi esifanele.
2021 Amakhodi Amabhonasi Okukwamukela e-Slots Capital Casino
Ibhonasi yediphozithi yokuqala Ibhonasi Elinganayo ka-200% efinyelela ku-R10,000
Ibhonasi Yediphozithi Yesibili U-105% ofinyelela ku-R10,500
Ibhonasi yediphozithi yesithathu U-70% ofinyelela ku-R7,200
Amakhodi Amabhonasi Ediphozithi Engekho e-Slots Capital Casino
Awekho amakhodi adingekayo ebhonasi yediphozithi engekho e-Slots Capital Casino. Abadlali baklonyeliswa ngo-R70 wokubhalisa nekhasino. Le yindlela enhle yokuzama ikhasino nemidlalo yayo ngaphandle kokubeka imali yakho engcupheni.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Slots Capital Casino
I-Slots Capital Casino inikeza abadlali uhlu lwamaphromoshini ansuku zonke, nokheshi obuyiselwa ngempelasonto ngokuya kwezinga le-VIP abakulo, kanye namabhonasi enkathi yonyaka nosuku lokuzalwa. Nasi isifinyezo salokho okutholakala lapha:
Ibhonasi yangoMsombuluko kuya ku-Lwesihlanu Ibhonasi yangoMsombuluko kuya kuLwesihlanu Ibhonasi elinganayo ka-100% ebandakanya u-R330 mahhala ngekhodi yebhonasi ethi WEEKLYMATCH. Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali ezingu-30x. Abadlali bangathola ibhonasi eyodwa kuphela, kungakhathaliseki usuku olukhethiwe.
Ibhonasi yansuku zonke Ibhonasi elinganayo ka-65% enesidingo sokubheja ukuze ukhiphe imali esingu-16x. Itholakala ngekhodi yebhonasi ethi 65EASYWIN.
Ibhonasi yangoMsombuluko Diphozitha u-R250 ukuthola u-R750 mahhala ngekhodi yebhonasi MONDAY300. Isidingo sokubheja ukuze ukhiphe imali singu-60x.
Ibhonasi yangoLwesibili Ibhonasi yangoLwesibili Ibhonasi elinganayo ka-200%, i-chip yamahhala ka-R150. Sebenzisa ikhodi yebhonasi TUESDAY200 eza nesidingo sokubheja ukuze ukhiphe imali esingu-30x.
Ibhonasi yangoLwesithathu Idiphozitha u-R500 ukuthola u-R999 mahhala. Sebenzisa ikhodi yebhonasi WEDNESDAY99.
NgoLwesine nangoLwesihlanu Ibhonasi elinganayo ka-150% kanye ne-chip ka-R250 yamahhala yeSonto. Sebenzisa ikhodi yebhonasi 150WEEKEND
Ibhonasi yangoLwesihlanu Ibhonasi elinganayo ka-100% kanye ne-chip ka-R1,000 yamahhala yoMgqibelo. Sebenzisa ikhodi yebhonasi 100FRIDAY100.
Ibhonasi yangoMgqibelo Ibhonasi yangoMgqibelo Ibhonasi elinganayo ka-250% ize ifike ku-R10,000. Sebenzisa ikhodi yebhonasi SATURDAY250. Isidingo sokubheja ukuze ukhiphe imali esingu-45x.
Ibhonasi yangeSonto Ibhonasi yangeSonto Ibhonasi elinganayo ka-100% enesidingo sokubheja ukuze ukhiphe imali esingu-20x nekhodi yebhonasi EASYSUNDAY.
Indlela Yokungena Ngemvume Nokubhalisa e-Slots Capital Casino ✍
I-Slots Capital Casino iyatholakala kusayithi yokudlala ngokushesha kudivayisi yakho ephathekayo, noma ungayidawuniloda ku-PC yakho.
Ukudawunilodwa nokufaka i-app ye-Slots Capital Casino kuyashesha futhi kulula. Vele uchofoze isixhumanisi sokudawuniloda, ongasithola phezulu kuwebhusayithi. Sicela wazi ukuthi le nguqulo yedawunilodi yenzelwe ideskithophu kuphela. Ifayela le setup.exe lizodawunilodwa kukhompyutha yakho ngokuzenzakalela. Kumele uvule ifayela le .exe ukuqala ukufaka i-app bese uqedela inqubo ngokulandela imiyalelo elula ekusikrini.
Manje usungavula i-app ye-Slots Capital Casino, uvule i-akhawunti bese uqala ukudlala.
I-Slots Capital Casino iyasebenza kumadivayisi aphathekayo e-Android nawe-iOS.
Uzothola ukuthi ukubhalisa kuyashesha nokuthi kulula, futhi ngemuva kokuqinisekisa i-akhawunti yakho nge-SMS noma i-imeyili, usukulungele ukudlala.
Imidlalo Yasekhasino Ye-inthanethi Ongayidlala e-Slots Capital Casino
I-Slots Capital Casino isebenzisa i-Rival ne-Saucify ukunikeza abadlali uhlu lwemidlalo. Kunenombolo enkulu yemidlalo etholakalayo. Kukhona neminye imidlalo esezingeni eliphezulu etholakalayo.
I-Slots Capital Casino inikela ngohlu lwemidlalo yasekhasino ye-inthanethi engaphezu kwengu-250. Ama-slot ayo akudala, ama-slot evidiyo nama-progressive jackpot slot ayathokozisa. Ama-slot anothe kakhulu ngezici, ngama-spin amahhala kanye namabhonasi. Abahlinzeki bomdlalo yi-Rival ne-Saucify. Imidlalo ye-Rival yazelwa ukubukeka kahle, futhi imidlalo ye-Slots Capital idume ngokunikeza amabhonasi amakhulu ansuku zonke.
I-Slots Capital Casino inohlu oluncintisanayo lwemidlalo yasetafuleni, lufaka phakathi i-PaiGow Poker, i-Roulette (yaseYurobhu neyaseMelika), i-Craps, i-Baccarat,i-Black Jack ne-Red Dog.
Abadlali bangajabulela uhlu lwe-poker yevidiyo yase-Slots Capital Casino, olunemidlalo efana ne-Joker Poker, i-Aces & Faces, noma bangazama inhlanhla yabo emidlalweni ekhethekile, efaka phakathi amagama anjenge-Keno, i-Bingo 80 Ball noma i-Itchin’ 2 Win.
Slots Capital Mobile Casino: I-Slots Capital Casino Iqhathaniseka Kanjani Kuselula?
Ipulatifomu yeselula ye-Slots Capital Casino iyafana nenguqulo ye-PC, futhi iningi lemidlalo ye-Rival ne-Saucify iyahambisana neselula, ngakho-ke uyakwazi ukufinyelela kuyo yonke imidlalo ngeselula yakho. Eminye imidlalo elungiselelwe kahle kakhulu ukuhlinzeka ngomuzwa omuhle wokudlala imidlalo yi-Captain Shockwave, i-Horn of Plenty, i-The Prize is Right, i-Wrath of Medusa, i-Max Cash, i-Elementium Spin 16.
Ngingayidawuniloda Yini i-Slots Capital Casino Kuselula Yami?
Alukho uhlobo oludawunilodekayo lwe-Slots Capital Casino olutholakalayo kubadlali beselula. Awuyidingi i-app – vele ungene bese udlala.
Izindlela Ezivunyelwe Zokukhipha Imali e-Slots Capital Casino
Skrill Yebo Amahora angu-48-72
Neteller Yebo Amahora angama-48-72
ecoPayz Yebo Amahora angama-48-72
EasyEFT Yebo Amahora angama-48-72
Wire Transfer Yebo Ukudlulisa Ngebhange Yebo Izinsuku zokusebenza ezingu 5-15
Izindlela Ezivunyelwe Zokudiphozitha Imali e-Slots Capital Casino
Inkampane ye-Slots Capital Casino Nemininingwane Yokuxhumana
Isungulwe: 2012 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: Ayikho
Umphathi ngu: Deckmedia N.V. I-imeyili: [email protected]
Ilayisense: Curacao Gaming Authority Ingxoxo Ebukhoma: Yebo
Ubuhle Nobubi be-Slots Capital Casino
- Kunemidlalo engaphezu kwengu-250 etholakalayo Alukho usizo ngocingo olutholakalayo
- Usizo lwamakhasimende lwe-24/7 - Ayikho imidlalo ebukhoma
- Ibhonasi yokukwamukela yediphozithi engekho
- Ibhonasi yediphozithi yokuqala, yesibili neyesithathu
- Amabhonasi namaphromoshini enkathi yonyaka amaningi
- Idawunilodi nesayithi yokudlala ngokushesha
- Ikilabhu ye-VIP enezinzuzo eziningi
- Isayithi ilula ukuyisebenzisa
Yini Eyenza Ukuthi I-Slots Capital Casino Ikhethwe Kakhulu Ngabadlali baseNingizimu Afrika?
Kuyatholakala uhlu oluhle lwemidlalo yasekhasino ye-inthanethi
Kuyatholakala inguqulo yedawunilodi neyesayithi yokudlala ngokushesha
Ibhonasi yokukwamukela yediphozithi engekho
Izikhalo nge-Slots Capital Casino Ningizimu Afrika
Ayikho imidlalo ebukhoma
Alukho usizo ngocingo
Ingabe i-Slots Capital Casino isemthethweni eNingizimu Afrika?
I-Slots Capital Casino isemthethweni eNingizimu Afrika. Ilawulwa nguHulumeni waseCuracao.
Ngiyikhipha Kanjani Imali ku-Slots Capital Casino?
Konke okudingeka ukwenze ukwenza indlela yakho uye esigabeni se-akhawunti lapho ungene ngemvume. Ukusuka lapha, uzokwazi ukufinyelela izindlela zakho zokuhoxa ezitholakalayo. Unezinketho ezithile zokuhoxa ezinomkhawulo omncane ($ 159 Wokudluliswa Kwezintambo) kanye nomkhawulo omkhulu ngesonto. Ukuhoxiswa kwemali kuzocutshungulwa kungakapheli amahora angama-48 kuye kwangama-72. Kunezinketho ezahlukahlukene zokuhoxa, njenge-Skrill, NETELLER, EcoPayz ne-EasyEFT.
Yini i-Slots Capital Casino?
I-Slots Capital Casino iyikhasino eku-inthanethi evumela abadlali ukuthi bakwazi ukufinyelela ekukhetheni okukhulu kwemidlalo yekhasino eku-inthanethi. Ilawulwa ngokuphelele futhi inikeza uhla olukhulu lwamabhonasi nezenyuso
Ngubani umnikazi we-Slots Capital Casino?
I-Slots Capital Casino iphethwe futhi iqhutshwa yi-Deckmedia N.V.
Ingabe i-Slots Capital Casino inezici zokubhejela ezemidlalo?
I-Slots Capital Casino ayinikeli ngendlela yokubhejela ezemidlalo.
Ingabe i-Slots Capital Casino Inikela Ngohlelo lwe-VIP?
Yebo, i-Slots Capital Casino inikeza uhlelo lwe-VIP. Kunezigaba ezine kulolu hlelo: Special, Gold, Platinum neDiamond. Uma ukule noma ikuphi kwalokhu, uma usufake idiphozi, ungathola ibhonasi esuka ku-100% iye ku-250%. Uzothola ibhonasi ngosuku lwakho lokuzalwa. Ungajoyina uhlelo lwe-VIP ngemuva kwezinsuku ezingama-30 ubhalisile ne-Slots Capital Casino. Udinga ukuqinisekisa ukuthi i-akhawunti yakho iyasebenza. Uzodinga ubufakazi obuvumelekile bokuthi ungubani. Ubulungu be-VIP buvumela umdlali ukuthi afinyelele imivuzo ehlukahlukene, kufaka phakathi imali nokuhamba emhlabeni jikelele.
Ziyini Izidingo Zokubheja Ukuze Ukhiphe Imali e-Slots Capital Casino?
Izidingo zokubheja eSlots Capital Casino ziphindwe izikhathi ezingama-60 inani lemali yebhonasi – ngakho-ke kubhonasi wokuqala wokwamukela idiphozi, uma uthola ibhonasi engu-R300, kuzofanele ubheje izikhathi ezingama-60 ngaphambi kokwenza imali. Lokhu kusho ukuthi kunengqikithi yama-R300 x 60, okungalingana no-R18,000 ekubhegiseni ngaphambi kokuthi kukhishwe imali.